Okhiye intercom - njengoba baphile isikhathi eside
Okhiye intercom ubheke lezo zinto, okuyinto futhi awuzange usikhumbule kuze kuyoba enkingeni kubo. Ngesinye isikhathi, evele kuphele kithi ukuvula umnyango. Bese siqala feverishly baqagela: "Kungani lokhu kwenzeka!" futhi "Sesizoyaphi zidlale okhiye entsha?"
Ukuze elilodwa (noma ezimbi) kuwe ngesikhathi sebebodwa wangaphambili, akunike ithiphu - pre-empt pre isimo esiyinkinga. Nakekela ukuphepha kanye nekhwalithi okhiye bakho kazibuthe. Ukuze wenze lokhu uzodinga kuphela ukwenza futhi ukhumbule iziqondiso amabili alula.
1) Miselela kusengaphambili okhiye zabo intercom.
Iqiniso liwukuthi lapho endlini ekuqaleni ababebuthene uhlelo lokuxhumana umnyango, ze yenkampani ukunikeza zonke izakhamizi eshibhe inketho interphone ukhiye. Kuyaqondakala - phela izihluthulelo ekhishwe mahhala, ngakho kungani babelana zokuchitha. Yingakho ukuwohloka kwabo okusheshayo, ukwehluleka ezingalindelekile, umonakalo mechanical, demagnetization ... Awu uma lokhu ukwenqaba okhiye akuzange kwenzeke hhayi ebusuku, ke thina nje ushayele ekhaya bese ulinda omakhelwane liyidliva. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, kulesi sici, ukuphila ugcwele lezimanga.
Uphi engcono oda okhiye entsha yama-computer? Lapho ukhululekile! okhiye Magnetic kungenziwa oda okufanayo nomkhiqizi-Isifaki intercom wakho kungaba studio ukwenziwa okhiye, kodwa ungafaka oda yakho futhi induduzo ekhaya kwi-inthanethi. Namuhla, kunamabandla amasevisi amaningi anikeza izinkonzo ezinjalo. Ukuthayipha, isibonelo, search engine ibinzana intercom okhiye ekhatsi Kiev futhi wena ekhasini lesifanele. Ngosuku olufanayo okhiye athandwayo uyoba nani, futhi nabo isikhathi isiqinisekiso umsebenzi wabo.
2) Usebenza okhiye intercom ababambelela imithetho emine elula:
egqoke okhiye kazibuthe njalo eceleni
ungavumeli Ningamcimi zabo noma ugesi
kubalekeleni emitters emasimini kagesi
Musa ukusebenzisa lapho sisebenzelana umnyango okhiye amabutho mechanical
Lokho bonke kukhona ukwazi futhi bathobele yimuphi umnikazi izikhiye kazibuthe. Iqiniso liwukuthi ngingowokuqala wendlu yonke okhiye intercom - idivayisi electronic. Landela lezi kokusikisela okungenhla, uyokwelula impilo izici ezibaluleke kakhulu ukhiye - chip. Nokho, uma izinto ezisetshenziswayo ezihamba ngogesi kuyoba ukuze, futhi intercom okhiye ngeke iphele.
Habib - onjani lendwangu iziphi izici zako?
Umbala nelineni: ubuqili uzokhetha
"Ikea" (omatilasi): ukubuyekeza amakhasimende futhi ingxoxo izinto. kumatilasi IKEA
Pillows okuhlobisa - a kwalokho enkulu kunoma lokubhalela.
Phezu izakhi lembhali yomthetho. izakhi Boneka nezingubo ngezandla zakho izingane
Izindawo ezinhle futhi waba muhle Sweden
"PBC-20." Izibuyekezo kodokotela neminye umkhiqizo, yokusetshenziswa, intengo
Iwashi Izinsalela zabesilisa: ukuklanywa kanye nesitayela enkulu
Ukuguqulwa plastids - Kuyaziwa emhlabeni zezitshalo. Plastids: ukwakheka kwazo, imisebenzi
101 zokupheka kusuka isibindi - ukukhetha okungcono!